Imveliso yeglasi yase-China yobuninzi be-fiber efakwe kwifektri kunye nabathengisi | Yuniu
Imveliso yobuninzi beglasi yefayibha eqhotyoshelweyo zizinto eziphambili ezinokusetyenziswa kwiGlassfibre Reinforced Concrete (GRC), yi-100% yezinto ezingaphiliyo, ikwindawo efanelekileyo yokutshintsha intsimbi kunye ne-asbestos kwinxalenye yecementi engalayelwanga.
I-fiberglass ye-AR / iglasi yefayibha egawuliweyo yenzelwe ngokukodwa i-GRC (ikhonkrithi eyakhiwe ngoglasi) ene-dispersion elungileyo kwiinkqubo zokuprinta kwangaphambili (umxube womgubo owomileyo okanye umxube omanzi) kulwakhiwo olulandelayo lwecandelo le-GRC.
Umba Ububanzi (um) Ubude obugunyiweyo (mm) Resin ehambelanayo
I-AR fiberglass ecoliweyo 10-13 12 EP UP
I-AR fiberglass ecoliweyo 10-13 24 EP UP
Umxholo wamanzi we-1. Ukuthoba okufanelekileyo, nokusasazwa kweemveliso ezigqityiweyo.
2.Quickly emanzi-out, amandla aphezulu ngoomatshini iimveliso ezigqityiweyo.
Bundling 3.Good: ukuqinisekisa ukuba imveliso akuthethi fluff kunye nebhola transit.
4. Ukusasazeka okulungile: ukusasazeka okuhle kwenza ukuba imicu isasazeke ngokulinganayo xa ixutywe nodaka lwesamente.
5. Iipropati ezibalaseleyo zomzimba kunye neekhemikhali: inokuphucula ngokubonakalayo ukomelela kweemveliso zesamente.
1. Iziphumo zokuqalwa kokuqhekeka kunye nokwandiswa kweglasi yefayibha eqiniswe yikhonkrithi yefluorine. Ukuphucula ukusebenza kwe-seepage kwikhonkrithi. Ukuphucula ukusebenza iqabaka eziphathekayo. Ukuphucula ukuxhathisa kunye nobulukhuni bekhonkrithi. Ukuphucula ukuhlala kwekhonkrithi.
2. Ifayibha yeglasi ijoyina umgca wesamente, ibhodi ye-gypsum, iglasi yesinyithi, izinto ezidityanisiweyo, izixhobo zombane kunye nezinye iiprojekthi zokwakha iimveliso, ezinokuqiniswa, zichaswe kukuchasana, ukunxiba ukuxhathisa kunye nokuqina.
3. Ifayibha yeglasi ijoyina idama, uphahla lwethayile, ichibi lokuqubha, ichibi lenkohlakalo, ichibi lokucocwa kwelindle lingabuphucula ubomi babo benkonzo.
Iiglasi ze-AR zeFayibha eziSikiweyo zihlanganiswe kwiibhegi zekraft okanye ezingxoweni ephothiweyo, malunga ne-25kg ngengxowa nganye, iingxowa ezi-4 ngengqimba nganye, ii-8 zeepallet kunye neebhegi ezingama-32 kwipallet nganye, Ngxowa nganye yeemveliso ezingama-32 ipakishwe yifilimu yokuncipha ye-multilayer kunye nebhanti yokupakisha. Kwakhona imveliso inokupakishwa njengoko iimfuno ezifanelekileyo zabathengi.
Iinkcukacha zokuhanjiswa: kwiintsuku ezili-15 emva kokufumana idiphozithi.
Q1.Ubiza imali yokubumba? Yimalini? Ngaba ingabuyiselwa? Uyibuyisela njani?
Akukho mrhumo wokufumana ubungqina
Q2.Siphi isiqinisekiso esele sidlulile kwinkampani yakho?
Q3.Whic abathengi ukuba inkampani yakho iphumelele uhlolo lomzi mveliso?
I-UK, i-UAE, iSaudi Arabia, uMzantsi Afrika, uMzantsi Korea, iJapan, iThailand, neVietnam
Umbuzo: Kuthatha ixesha elingakanani ukuhambisa okuqhelekileyo?
Iimveliso eziqhelekileyo iintsuku ezingama-7-15, iimveliso ezenziwe ngokwezifiso iintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20
Ngaba imveliso yakho inobuncinci be-odolo yobungakanani? Ukuba kunjalo, buthi ubuncinci bobungakanani beodolo?
Akukho mveliso ziqhelekileyo, iimveliso ezenzelwe wena itoni enye
Q6.What umthamo wakho xa uwonke?
Iitoni ezingama-500000 / ngonyaka
Q7. Inkulu kangakanani inkampani yakho? Lithini ixabiso lemveliso yonyaka?
Abantu abangama-200, iinkampani ezimbini zasekhaya kunye nesebe elinye laseThailand
Egqithileyo 100 gsm / 160gsm Fibreglass enemingxuma
Okulandelayo: Iglasi yefayibha yekhabhoni yefayibha yebha yeglasi yeglasi